January 2016 - Page 2 of 38 - iftineducation.com
8 Talaabo Oo Adiga Iyo Xaaskaagu Aad Ku Kordhin Kartaan Kacsiga.Waxa Laga Yaaba Midkiin Inuu Dhanka Kacsiga…
iftineducation.com – Talaabo Oo Adiga Iyo Xaaskaagu Aad Ku Kordhin Kartaan Kacsiga.Waxa Laga Yaaba Midkiin Inuu Dhanka Kacsiga…Uu Ka Liito waa wax iska caadi ah mararka qaa in laga hadli arimahan oo kale waana daruuri si bulshadeenu uga faaideaystaan haddaba aanu u guda galno 8 nooc ee aanu kor kusoo sheegnay qaabka looga badbaado 1:isku daya adiga iyo xaasku inaad galmada…
iftineducation.com – Halkan Ka bar 9 Faa’ido uu leeyahay Canbaha Iyo awooda Galmada Oo uu Kordhiyo…..waxaan ka hadleynaa Geedka la yiraahdo Cambaha iyo faidada uu u leeyahay qofka . Miraha Cambaha dhadhan ahaan iyo midib ahaanba waa miro Qurux badan qofkii arkana wuu jecleestaa cunitankeda wax yaabaha laga helo waxa ka mid sida 1: in uu nadiifiyaa dhamaan dhiiga jirka 2:in…
iftineducation.com – Jimcaale Vs Jaamac JAAMAC:- Jimcaaloow jaranjaro iyo burris mahaysaa?. JIMCAALE:-maxaad karabtaa jaranjarada ma guri ayaad silig ku xiri rabtaa!. JAAMAC:-ma maqal miyaa in wakhtigii loo qabtay in Boorarka dhamaantood Afsoomaali lagu qoro dhamaaday oo la la’yahay. Shaqaale loo diro. JIMCAALE:-Boorarka bis miyaan Soomaali kanahay aaway Shilin soomaaligii, boorarkana maa Afsoomaaliga lagu wada qoro Boorka Dekadda iyo Kan Ariboorka. War…
iftineducation.com – Reysal wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharma’arke, ayaa difaacay qodobbadii ay dowladda Soomaaliya ka soo saartay shirkii madasha wadatashiga qaranka ee doorashada sanadkaan 2016. Cumar Cabdi Rashiid ayaa tilmaamay in Soomaaliya aysan suura gal ka ahayn nidaam heer deegaan, Puntland aysan xaq ulaheyn in ra’yigeeda la qaato. “Puntland aan xasuusiyo ineysan deegaanadooda ahayn heer deegaan, marka ay iyaga ka baxaan…
iftineducation.com – Dowlada Puntland ayaa todobaadkan sheegtay inay kasoo horjeedo go’aankii kasoo baxay Dowlada Federaalka Soomaaliya ee lagu sheegay qaabka dhismaha Golayaasha Baarlamaanka Federaalka ee lasoo dooran doono dhamaadka sanadkan 2016. Dowlada Federaalka ayaa go’aankeeda waxaa ku taageeray Beesha Caalamka, kadib markii wax heshiis ah kasoo bixi waayey MADASHII WADATASHIGA ee ka koobnaa Dowladaha xubnaha ka ah Federaalka iyo Dowlada Dhexe…
Dhar Qalabeesan oo Dumarka Isaga Celinayaan Kufsiga oo Gabar Reer London Sameyse
iftineducation.com – Sida ay ku warramayso shabakadda wararka Ingiriiska ee Metro, haweenay lagu magacaabo Sara Mabel oo dalkaasi Ingiriiska u dhalatay ayaa toddobaadkan si rasmi ah u shaacisay hindise ay ku hal-abuurtay kuna soo saartay nooc ka mid ah cabbaayadaha ay haweenku ku laabbistaan oo si gaar ah loo farsameeyey taasi oo la sheegay in ay haweenku kaga hor tagayaan in…
Daawo”Faah faahin ku Saabsan Qaabkii oo u dilday Wiilkii Soomaaliga ahaa Gabar u dhalatay….
iftineducation.com – Wiil Soomaali ah oo qaxooti ah ayaa waxaa la sheegay inuu Gabar Swedish ah oo ku dilay dalkaas Sweden ka dib markii uu Tooreey la dhacay iyadoona ay gabadhaas ay ugu geeriyootey Isbitaalka dhaawac ka soo gaarey mindiyeentaas. Wiilkaan Soomaaliga ah oo aan magaciisa la shaacin ayaa waxaa la sheegay inay da’adiisu ay tahay 15 sano jir islamarkaana uu…
iftineducation.com – Gothernberg -Maxkamad ku taal magalaada Gothernberg ee dalka Sweden ayaa maalintii shalay waxaa lasoo taagay wiil Soomaali ah oo lagu eedeeyay in uu midi ku dilay gabar ka shaqeeneysay xarun lagu xanaaneeyo caruurta aan waalidkood la socon. Wiilkii Soomaaliga ahaa ee gabadha caddaanka ku dilay dalka Sweden ayaa maxkadama dalka Sweden la soo horjoojiyey,wiilkana ayaa magaciisa lagu sheegay Yuusuf…
iftineducation.com – Ayadoo dhawaanahaan Maamulka Somaliland oo degaanadiisa ka waday qorshayaal looga masaafurinaayo dadka aan sharciga ku heysan oona qeyb kayihiin Soomaalida koofurta kasoo haajirtay kuna nool degaanadaas. Idaacada VOA ayaa wareysatay wasiir waran cadde ayaa weydisay sababta soomaalida loo rafaayo xili ay wariyada wareysiga qaadayse wasiirka ku sheegtay in asaga qudhiisa isticmaalo passborka soomaaliya. Wasiirka ayaa mar qura lasoo booday…
iftineducation.com – Wasiirka Arimaha Gudaha Maamulka Lamagac Baxay Soomaaliland ayaa sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan sheekh maxamuud saa id oga xanuunsanaayo maskaxda. Wasiirka ayaa shaaciyay in Beesha Xasan sheekh ka doonayaan in ninkaan madaxweynaha u ah in daaweystaan ayna hubiyaan Caafimaadkiisa dhanka Maskaxda waa sida oo hadalka udhigay Wasiir waran cadde. Tani aya aimaatay xili Dowlada soomaaliya shaacisay in maamulka…